သား အိမ် ကင်ဆာတောင် ပျောက် တယ် ဆို တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ နှ င့် လယ်ပုဇွန် လုံး – Shwewiki.com
သား အိမ် ကင်ဆာတောင် ပျောက် တယ် ဆို တဲ့ ပေါက်ပန်းဖြူ နှ င့် လယ်ပုဇွန် လုံး
January 15, 2020 By admin Knowledge
တို့ အမေ အတွက် ဆေးတွေအများကြီးရောက်လာပါပြီ…. အမေက သားအိမ်ကင်ဆာကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားနေရတာပါ…. ဆေးသွင်းလိုက် ဓာတ်ကင်လိုက်နဲ့ ဆေးရုံမပြတ် တက်လိုက် ဆငိးလိုက်နဲ့ ဆရာဝန်စုံအောင်ကုလာရင်းကပဲ ကင်ဆာရောဂါကတော့ တနေ့တခြား တတိတိနဲ့တိုးလာတာ …..အခုတော့ အဆင့်လွန်ဆိုပီး သမားတော်ကလည်း ခီမိုထပ်သွင်းဖို့ တောင်လက်မခံတော့ပါဘူး….ဓာတ်ရောင်ခြည်လည်း တခေါက်ကို ၃၅ကြိမ်စီ၂ကြော့ ပြန်ကင်ထားပီမို့ ထပ်ကင်လို့လည်း မရတော့ဘူးတဲ့…. တိုင်းရင်းဆေးလေးတွေ သောက်ကြည့်သဘောင်္ရွက်ထောင်းသောက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပြီး အိပ်ဆေးနဲ့ သွေးတိတ်ဆေး နာကျင်ပျောက်ဆေးတွေပဲပေးပါတော့တယ်။
အဲ့လို နဲ့ ဟိုမေးဒီမေးမေးကြရင်းက ပြည်ကအမတဝမ်းကွဲဆီက ကြားတဲ့ဆေးက လယ်ပုဇွန်လုံး(ဂဏာန်းလုံး)ကို ပေါက်ပန်းဖြူရွက်နဲ့ ချက်စားရမယ် ဇီးဖြူသီးပြုတ်ရည်နဲ့ ဖန်ရေဆေးတာ ပြုတ်ရည်ထဲဝင်စိမ်တာ လုပ်ပေးရမယ်တဲ့။ လက်တွေ့ပျောက်သွားတဲ့ အမျိုးသမီးက ပေးလိုက်တဲ့ဆေးနည်းပါ…. အဲဒါနဲ့ချက်လဲစားရော ၃ရက်အတွင်း သွေးဆင်းတာရပ်သွားတာအခုထိပါပဲ။
အရင်က သွေးတိတ်ဆေးမပြတ်သောက်နေတာကို မရပ်လို့သမားတော်ကအစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ဆီသွား မှန်ပြောင်းကြည့်ဗိုက်ခွဲ ဆီးအိတ်ဝမ်းအိတ်ထုတ်ထားဖို့တောင် အကြံပြုနေပါပြီ။ ဇီးဖြူသီးပြုတ်ရည်ကလဲ ကောင်းပါတယ် အမေကမစိမ်နိုင်လို့ ရေချိုးတာဖန်ရေဆေးတာလေးတွေ လုပ်ရုံနဲ့တောင် ဆယ်ရက်အတွင်း အကျိတ်တွေနဲ့ ရောင်ရမ်းပြီး အသားမာကြီးဖြစ်နေတဲ့ ဗိုက်ကောပေါင်တွေကော အကျိတ်တွေပျောက်ပြီးချပ်ရပ်သေးကျုံ့ပြီးပျော့ဖတ်သွားပါပြီ ……
ခြေတွေလက်တွေဖောရောင်နေတာလဲ အကုန်ပျောက်ပြီး အသားအရေစိုပြေလာပါပြီ။ အမေ့လိုပဲ ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာသည်တွေ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အနာနဲ့ဆေးတွေ့စေချင်လို့ fbပေါ် ဒီpostလေး ရေးတင်လိုက်တာပါ။အမေကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့အထိ ၆နှစ်ကြာမှ ဆေးတွေ့ရတော့ ပျောက်ဖို့တော့ သိပ်မမျှော်လင့်နိုင်ပါဘူး…. ရောဂါခံစားရသက်သာပြီး အသက်ရှည်ရှည်လေးနေနိုင်ဖို့ပဲ အစွမ်းကုန်ု ကြိုးစားနေကြရတာပေမဲ့ ရောဂါနုသူဆို လုံးဝပျောက်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်ရှင်…..။
တို့ အမေ အတှကျ ဆေးတှအေမြားကွီးရောကျလာပါပွီ…. အမကေ သားအိမျကငျဆာကို နှဈရှညျလမြား ခံစားနရေတာပါ…. ဆေးသှငျးလိုကျ ဓာတျကငျလိုကျနဲ့ ဆေးရုံမပွတျ တကျလိုကျ ဆငိးလိုကျနဲ့ ဆရာဝနျစုံအောငျကုလာရငျးကပဲ ကငျဆာရောဂါကတော့ တနတေ့ခွား တတိတိနဲ့တိုးလာတာ …..အခုတော့ အဆငျ့လှနျဆိုပီး သမားတျောကလညျး ခီမိုထပျသှငျးဖို့ တောငျလကျမခံတော့ပါဘူး….ဓာတျရောငျခွညျလညျး တခေါကျကို ၃၅ကွိမျစီ၂ကွော့ ပွနျကငျထားပီမို့ ထပျကငျလို့လညျး မရတော့ဘူးတဲ့…. တိုငျးရငျးဆေးလေးတှေ သောကျကွညျ့သဘောင်ျရှကျထောငျးသောကျကွညျ့ဖို့ အကွံပေးပွီး အိပျဆေးနဲ့ သှေးတိတျဆေး နာကငျြပြောကျဆေးတှပေဲပေးပါတော့တယျ။
အဲ့လို နဲ့ ဟိုမေးဒီမေးမေးကွရငျးက ပွညျကအမတဝမျးကှဲဆီက ကွားတဲ့ဆေးက လယျပုဇှနျလုံး(ဂဏာနျးလုံး)ကို ပေါကျပနျးဖွူရှကျနဲ့ ခကျြစားရမယျ ဇီးဖွူသီးပွုတျရညျနဲ့ ဖနျရဆေေးတာ ပွုတျရညျထဲဝငျစိမျတာ လုပျပေးရမယျတဲ့။ လကျတှပြေ့ောကျသှားတဲ့ အမြိုးသမီးက ပေးလိုကျတဲ့ဆေးနညျးပါ…. အဲဒါနဲ့ခကျြလဲစားရော ၃ရကျအတှငျး သှေးဆငျးတာရပျသှားတာအခုထိပါပဲ။
အရငျက သှေးတိတျဆေးမပွတျသောကျနတောကို မရပျလို့သမားတျောကအစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျးဆရာဝနျဆီသှား မှနျပွောငျးကွညျ့ဗိုကျခှဲ ဆီးအိတျဝမျးအိတျထုတျထားဖို့တောငျ အကွံပွုနပေါပွီ။ ဇီးဖွူသီးပွုတျရညျကလဲ ကောငျးပါတယျ အမကေမစိမျနိုငျလို့ ရခြေိုးတာဖနျရဆေေးတာလေးတှေ လုပျရုံနဲ့တောငျ ဆယျရကျအတှငျး အကြိတျတှနေဲ့ ရောငျရမျးပွီး အသားမာကွီးဖွဈနတေဲ့ ဗိုကျကောပေါငျတှကေော အကြိတျတှပြေောကျပွီးခပျြရပျသေးကြုံ့ပွီးပြော့ဖတျသှားပါပွီ ……
ခွတှေလေကျတှဖေောရောငျနတောလဲ အကုနျပြောကျပွီး အသားအရစေိုပွလောပါပွီ။ အမလေို့ပဲ ကငျဆာရောဂါဝဒေနာသညျတှေ ဒီစာလေးဖတျပွီး အနာနဲ့ဆေးတှစေ့ခေငျြလို့ fbပျေါ ဒီpostလေး ရေးတငျလိုကျတာပါ။အမကေတော့နောကျဆုံးအဆငျ့ရောကျတဲ့အထိ ၆နှဈကွာမှ ဆေးတှရေ့တော့ ပြောကျဖို့တော့ သိပျမမြှျောလငျ့နိုငျပါဘူး…. ရောဂါခံစားရသကျသာပွီး အသကျရှညျရှညျလေးနနေိုငျဖို့ပဲ အစှမျးကုနျု ကွိုးစားနကွေရတာပမေဲ့ ရောဂါနုသူဆို လုံးဝပြောကျသှားမယျလို့ ထငျပါတယျရှငျ…..။
ချစ်သူ က ဇန်နဝါရီလ မှာ မွေး တဲ့သူ ဆို ရင် ဒါလေး ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး များ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းတွေ အဆင်ပြေလာစေ ရန်